Midab Gargaar Madow ah oo Faa'iidooyin Caafimaad iyo Codsi ah
Waa maxay Soo-Saaris Gargaar Madoow?
A Soosaarka toonta madow waa nooc toon ah oo laga keenay halsano iyo gabow toon cusub. Daaweynta toonta si loo soo saaro toonta madow waxay ku dhacdaa xaalado qoyan oo heerkulkoodu sarreeyo oo u dhexeeya 40 ° C ilaa 60°C qiyaas ahaan toban maalmood.
Xaaladahan oo kale, toonku si dhakhso ah ayey u weynaadaan waxayna isu beddelayaan caddaan ilaa midab madow / madow. Waxaa ka buuxa faytamiinno muhiim ah iyo macdano sida manganese, Vitamin C, Vitamin B6, Selenium, Vitamin B1, fosfooraska, naxaasta iyo kaalshiyamka.
Toonta madow ee la shiilay waxay boqolaal sano ah caan ka ahayd kor u qaadida dhadhanka cunnada ee Thailand, Kuuriyada Koofureed, iyo sidoo kale Japan laakiin wadamo kale sida Taiwan, ayaa cunaqabateyntay muddooyinkii ugu dambeeyay, gaar ahaan maqaayadaha dhaadheer iyo maqaayadaha cuna. Waxaa badanaa loo istcimaalaa in lagu daro dhadhanka cuntooyinka kala duwan, oo ay kujirto hilibka lagu qaso macmacaanka, waxaana loo tixgeliyaa xoojinta cuntada dhadhan fiican maxaa yeelay sifooyinka antioxidant-ka.
Ka sokow wanaajinta dhadhanka cuntada, faa iidooyinka kale ee toonta madow waxaa ka mid ah taageerada luminta miisaanka, hagaajinta caafimaadka maqaarka iyo habka difaaca jirka oo aad u xoogan. Waad iibsan kartaa toon madow oo si khafiif ah u eg qaab budo ah oo laga soosaaray toonta madow, kubadaha laga soosaaray toonta madow ama casiirka toonta madow.
Farsamaynta Waxqabadka Gaariga Madoow
Soosaarka toonta madow waxay leedahay saameyn anti-bararka kaasoo ay ku gaaraan hoos u dhac MAYA iyo wax-soo-saarka cytokine-ka ee pro-inflammatory ee unugyada 'LPS-induced RAW264.7 cells'. Toonta unugyada hexane ee badashada iyo muujinta ICAM-1 iyo VCAM-1 ee ku jirta TNF-α-firfircoonida unugyada stromal endometrial ee jirkaaga.
Waxay sii xakameyneysaa, leukotrienes, cytokines pro-inflammatory iyo sidoo kale waxqabadyada COX-2 iyo 5-lipooxygenase gudaha unugyada 'LW' ee unugyada 'RAW264.7'. Natiijo ahaan, mid ka mid ah caabuq ayaa sii xumaanaya ama waa laga ilaaliyaa inuu dhaco.
Marka ay timaaddo waxqabadka oxidative, toonta madow waxay ka kooban tahay ifafaaleyaal iyo flavonoids, oo labaduba door muhiim ah ka ciyaara firfircoonaanta Nrf2. Xeryahooda kala duwan ee ay bixiso toonku waxay kordhiyaan heerka muujinta ee mRNA-ga enzymes-ka antioxidant-ka sida HO-1, NQO1, iyo GSTs. Xeryaha, oo ay ku jiraan astaamaha tetrahydro-β-carboline, Nglutamate -fructosyl, N-fructosyl arginine allixin iyo selenium, ku guuleysiga tan iyada oo loo marayo Nrf2 activation.
Soosaarida Soosaarida Gargaarka Madoow
Sidii aan horayba u soo sheegnay, soosaarka toonta madow waxaa laga baaraayaa toonta cusub iyadoo la sifeynayo aagga si adag loo xakameeyo. Deegaanka waa in uu ahaadaa mid qoyaan leh (leh 80 ilaa 90% qoyaan ku dhow) iyo sida ugu kulul 40 °C ilaa 60 °C. Inta lagu gudajiro hawsha, xeryahooda kala duwan ayaa sameysma natiijada ka dhalanaysa Maillard.
Waqti kadib, toontii marba midabada cad waxay u madoobaan midab madow. Iyaguna sidoo kale horumariyaan caraf udgoon, sharoobo, dhadhanka balsamic, dhir udgoon iyo udgoon gaar ah.
Muddada hawsha daaweyntu way kala duwan tahay min soo-saare ilaa mid kale laakiin caadiyan wuxuu u dhexeeyaa afar ilaa afartan maalmood. Tani waxay kuxirantahay dhaqanka iyo doorbidayaasha soosaaraha iyo sidoo kale ujeedooyinka loogu talagalay soosaarka toonta madow.
Si kastaba ha noqotee, marka loo eego natiijada ka soo baxday hal daraasad, 21 maalmood ayaa ku habboon marka daaweynta toonta lagu sameeyo qoyaan qaraabo ah 90% iyo heerkul 70 60 °C. Marka loo eego daraasadda, shuruudaha iyo muddada daaweynta ayaa sare u qaadda awoodaha antioxidant-ka ee alaabada soo baxday, sidaa darteed ugu badnaan faa'iidooyinka soosaarka toonta madow.
Madoowga Soosaarista Faa'iidooyinka Caafimaadka
Waxaa jira dad badan Toonta madow waxay soo saartaa faa'iidooyinka caafimaad, Oo ay ku jiraan:
1. Soosaar Garaash madow wuxuu ka caawiyaa culayska
Natiijooyinka ka soo baxay hal daraasad jiir ayaa muujisay in toonta madow ay si weyn hoos ugu dhigi karto miisaanka jidhka, unugga dufanka leh iyo dufanka caloosha. Tani waxay tilmaan adag u ahayd toonta madow miisaanka oo yaraada faa'iidooyinka ka dhexeeya aadanaha.
Caddaynta waxaa taageeray daraasad dhowaan la sameeyay oo muujineysa in ku darista toonta madow ay hagaajin karto awoodda gubashada kalori ee jirkaaga. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad si dhakhso leh u daadiso miisaanka si aad u hesho caafimaad iyo fiisig wanaagsan.
Sidaa darteed, haddii aad cayil tahay ama aad rabto uun inaad xoogaa miisaan lumiso, ka fikir inaad ku garaacdo awoodda luminta toonta madow.
2. Toonta madow waxay faa'iido u leedahay maqaarka
Faa'iidooyinka toonta madow ee maqaarku waa natiijada helitaanka xarunta S-allylcysteine ​​ee toonta. Isku-darka ayaa ka dhigaya toonta inay si dhib yar u shiideyso si ay u siiso maqaarkaaga iyo jirkaaga intiisa kale kahortag cudurada.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka toonta madow ee maqaarku waa ka hortagga finanka iyo baabi'inta. Nabarradu waa xaalad maqaar oo bakteeriya ah oo lagu garto nabarro iyo nabarro u eg finanka maqaarkaaga. Nabarka ayaa ku dhaca xanaaqa iyo caabuqyada timahaaga.
Sababtoo ah hantideeda bakteeriyada, oo ay ugu mahadcelineyso allicin, soosaarka toonta madow waxay dishaa bakteeriyada keenta cudurka. Intaa waxaa sii dheer, saameynteeda anti-bararka waxay ka caawineysaa yareynta bararka iyo bararka la xiriira finanka.
3. Soosaar Garaash madow wuxuu ka caawiyaa kor u qaadista Kolestaroolka Jirka
Daraasado kala duwan oo saynis ah ayaa muujinaya in toonta madow ay ka caawiso hagaajinta kolestaroolka dadka ku dhibtoota heerarka kolestarol aad u sarreeya. Waxay kordhisaa lipoproteins-ka aadka u sarreeya (HDL), waa kolesteroolka wanaagsan ee qofka. Daraasadaha kale waxay soo jeedinayaan inay sidoo kale hoos u dhigto heerarka kolestaroolka xun iyo triglycerides-ka sare.
4.Black Garlic Extract Waxay Caawisaa hagaajinta cadaadiska dhiigga
Toonta madow waxaa kuxiran xeryahooda organosulfur, toonta madow waxay kaloo ka caawisaa marinka dhiigga inuu isdejiyo. Is-dejintani waxay keenaysaa hoos u dhaca cadaadiska dhiigga maadaama uu dhiiggu haysto qol badan oo sifiican usocda.
Daraasad lagu sameeyay 79 bukaan oo qaba dhiig karka, cilmi baarayaashu waxay sheegeen in celcelis ahaan hoos u dhaca cadaadiska dhiigga ee 11.8 mm bukaannada qaatay kiniiniyada toonta. Bukaannadan ayaa la geeyay 12 todobaad oo lagu daweeyo toonta halkaasoo ay ka qaadanayeen laba ama afar kiniiniyada toonta madow maalin kasta inta lagu gudajiro.
5. Relief Relief
Ku xirmay antioksidanter, toonta madow waxay bixin kartaa kaalmo barar weyn. Tani waxay ku saleysan tahay xaqiiqda in antioxidant-ku ay xakameyso calaamadaynta unugyada, sidaas darteed ay gacan ka geysaneyso yareynta caabuqa. Ka sokow, antioxidants waxay baabi'isaa xag-jiryada halista ah ee jirkaaga ku jira si ay uga ilaaliyaan unugyada jirkaaga culeyska sunta ee waxyeello u geysta, taasina waxay horseedda caabuq.
6. Timaha caafimaadka qaba
Faa'iidooyinka toonta madow ee timaha ayaa loo yaqaan dadka tan iyo markaas muddooyinka qadiimiga ah. Maanta, saliida toonta madow waxaa laga heli karaa dukaanno badan oo la isku qurxiyo si loo siiyo dadka doonaya inay ilaashadaan timo caafimaad qaba oo leh faa'iidooyin toon madow oo timo leh. Saliidu waxay taageertaa koritaanka timaha cusub, waxay joojisaa timaha soo dhaca waxayna yareysaa luminta timaha marka si joogto ah loo dabaqo.
Toonta madow waxay faa'iido u leedahay asliga timaha xaqiiqda ah in toonku leeyahay guryaha lidka-microbial, sidaas awood u leh inay la dagaallanto bakteeriyada, fayrasyada, fungus, iyo sidoo kale ku dul-nooleyaasha. Sidaa darteed, haddii aad ku mariyo saliid madow toonta maqaarka madaxaaga, waxay ka hortegi kartaa suurtagalnimada dabiiciga ah ee abuurista noolahaas. Natiijo ahaan, timaha timahaaga iyo maqaarkaaga ayaa caafimaad qaba.
Intaa waxaa dheer, faa'iidooyinka toonta madow ee timaha waxaa loo aaneynayaa saameynta anti-bararka ee toonta. Codsiga saliidda timaha toonta madow ee madaxaaga ayaa yareyn kara bararka iyo cuncunka la socda iyo dardargelinta timo luminta xaaladaha qaarkood.
7. Soosaar Garaash madow wuxuu ka caawiyaa kahortaga koritaanka Kansarka
Sida lagu sheegay daraasad ay samaysay Jabaan oo la qabtay 2007, isticmaalka toonta madow waxay yarayn kartaa buro jiirka. Cilmi baarayaashu waxay tuhunsan yihiin in tani ay ku dhici karto aadanaha sidoo kale. Mawqifkani wuxuu heshiis kula yahay joornaalka caalamiga ah ee kahortaga kahortaga dib u eegis nidaamsan. Dib-u-eegiddu waxay soo jeedinaysaa in qaadashada toonta da'da ah ay si toos ah ula xiriirto horumarinta kansarka.
Sidoo kale, daraasad fiitamiin ah oo la sameeyay 2014 waxay soo jeedisay in soosaarida toonta madow ee madow ay yareyn karto kansarka mindhicirka koritaanka unugyada iyo xitaa baabi'inta unugyada kansarka.
8. Soo Bixinta Gardaarka Madoow wuxuu xaqiijiyaa Caafimaadka Wadnaha oo Wanaagsan
Caafimaadka wadnaha horumarku wuxuu ka mid yahay faa'iidooyinka laga soosaaray toonta madow oo caan ku ah. Nooca xayawaanka ee 2018 oo la isbarbar dhigayo faa'iidooyinka laga soosaaray toonta madow iyo saamaynta toonta ceeriin ee caafimaadka wadnaha ee qofka soo kabanaya, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in labada nooc ee toontu ay si siman waxtar ugu leeyihiin yareynta dhaawaca wadnaha.
Ka sokow, awooddeeda xakameynta kolestaroolka awgeed, toonta madow ee la shiilay waxay sidoo kale yareyn kartaa halista cudurka wadnaha.
9. Soo Bixinta Gargaarka Madoow wuxuu ka caawiyaa kor u qaadista caafimaadka maskaxda
Intaa waxaa sii dheer, toonta madow waxay sidoo kale kor u qaadi kartaa xusuustaada, gaar ahaan haddii aad la dhibtooneyso xaalad garasho sida iyo cudurka Parkinson, cudurka Alzheimer ama xitaa jahawareerka. Ka hortagga antioxidant-ka ee jira ayaa yareyn kara bararka mas'uul ka ah ama la xiriira xaaladda. Natiijo ahaan, caafimaadka maskaxdaagu wuu fiicnaanayaa, iyadoo leh awood xusuusta oo wanaagsan.
Toonta kale waxay soo saaraan faa'iidooyinka caafimaadka
Tan iyo markii soosaarka toonta madow ay xoojiso nidaamka difaaca, waxay sidoo kale suurtogal u yihiin:
Ka hortagga cudurka macaanka iyo kahortaga
Kahortaga kansarka dhiiga iyo gargaarka
boogta-sababa caabuqyada dheef-shiidka
kahortaga kansarka sanbabada iyo kahortaga
xabadka oo laga bogsado
ka hortagga hargabka caadiga ah iyo kahortagga
caabuqa khamiirka siilka
Farqiga u dhexeeya Garlic Madow iyo Garlic Cusub
Sababta oo ah falcelinta Maillard ee ah in toonta cusubi ay gasho si ay u noqoto toonta madow, lama yaabin in labadan qaab toon ay kala duwan yihiin, ma ahan oo keliya midabka caqliga leh, laakiin sidoo kale waxay ka kooban tahay kiimikada iyo dhadhanka.
Isbeddelka dhadhanka ayaa si weyn wax ugu kordhinaya yareynta fructans (fructose iyo glucose) toonta inta lagu gudajiro. Ugu dambeyntii, toonta gadaasheeda waxay ku dhamaanaysaa heerar hooseeya midhaha ka hooseeya toonta aan la isticmaalin. Iyadoo la tixgelinayo in miraha loo yaqaan 'fructans' ay yihiin furaha ugu muhiimsan ee sameeyayaasha, tiradooda la yareeyay, sidaa darteed, waxay la macno tahay in toonta madow ay ka yarayn doonto midda cusub.
Dhadhanka soosaarka toonta madow ma aha mid u xoog badan sida toonta cusub; kii hore waa macaan macaan, sharoobo iyo balsamic. Dhanka kale, kan dambe ayaa ka xoog badan oo weerar badan. Tani waa sababta oo ah toonta madow waxay leedahay wax yar oo ka kooban allicin Inta lagu gudajiro howlaha gabowga, qaar ka mid ah allicin ee toonta cusub waxay isu beddelayaan xeryo sunta ah sida diallyl sulfide, ajoene, diallyl disulfide, diallyl trisulfide iyo sidoo kale dithiins.
Sababta oo ah isbeddelada hantida kimikalikada, toonta madow waxay leedahay bioactivity sare, tusaale ahaan, guryaha antioxidant, marka loo eego toonta cusub. Xeryaha ay ku jiraan toonta madow, sida S-allylcysteine ​​(SAC) way firfircoon yihiin marka la barbar dhigo kuwa toonta cusub.
Gaar ahaan, soosaarka toonta madow waxay ku badan tahay oksidayaasha, kalooriyada, fiberka iyo birta iyo birta marka loo eego toonta cayriin. Dhanka kale, toon cayriin ayaa leh fiitamiin C, carbs iyo allicin marka loo eego qaabka toonta ee la warshadeeyay.
Si ay u noqoto mid sax ah, laba qaado oo toon ah oo cayriin ayaa leh illaa 25 kalooriyo, 3 mg sodium, 5.6 g karbohaydrayt, 1 g protein, 0.1 g baruur, 0.4 g fiber cuntada, 5.2 mg vitamin C, 30 mg kaalshiyam iyo 0.3 mg birta. Taas bedelkeeda, isla xaddiga soosaarka toonta madow wuxuu ka kooban yahay 40 kalooriyo, 4g carbs, borotiinka 1g, 2g dufanka, 1g fiber cuntada, 160mg soodhiyam, bir ah 0.64mg, fitamiin 2.2mg ah iyo 20 milligram oo kaalshiyam ah.
Qiyaasta Soo Saarista Garlic Madoow
Haddaad rabto inaad qaadato kubadaha toonta madow ee la soo saaro, cabitaanka toonta madow, ama soosaarka toonta madow leh gintong, waa muhiim inaad raacdo qiyaasta lagugula taliyay. In kasta oo soosaarka toonta madow ay tahay badeecad dabiici ah, waxay u horseedi kartaa qaar ka mid ah waxyeelooyin haddii lagu qaato xad-dhaaf xad-dhaaf ah.
Waayo, budada soosaaray toonta madow si aad uga sameyso casiir soosaaray toonta madow ama casiirka toonta madow ama lagu daro cuntadaada, si isdaba joog ah u isticmaal 1/3 tsp budada ah hal mar maalintii. Qiyaastaani waxay sidoo kale khuseysaa markaad rabto inaad isticmaasho soosaarida toonta madow oo leh sinjibiil bentong. Haddii kale waad raaci kartaa warqadda dhakhtarkaaga.
Ma waxaad dooneysaa inaad ogaato inta toon madow ah oo la cuno maalin? Hagaag, ma jiraan wax cadaymo ah oo saynis ah oo lagu ogaanayo sida saxda ah inta toonta madow ah ee la cuno maalintii. Si kastaba ha noqotee, daraasado kala duwan iyo dib u eegisyo isticmaala ayaa soo jeedinaya taas 5-10 qaybood (toon) maalintii waa mid wax ku ool ah oo badbaado leh.
Haddii aad rabto inaad qaadato toon madow oo laga soosaaray kubadaha ama kiniiniyada, qiyaasta ugu badan ee lagugula taliyay waa 200mg. Wixii ku saabsan Madowga Madxafka laga soosaaray Tonic Gold, oo ah casiir laga soosaaray toon madow oo caan ah, qiyaasta lagu taliyey waa 70ml maalintii.
Midab Gargaarka Madoow ma Khatarbaa?
Soosaarka toonta madow guud ahaan waa mid aad u aamin badan isticmaalka aadanaha iyo xitaa isticmaalka la mariyo. Si kastaba ha noqotee, sida dheeri ah oo afka ah, way awoodi kartaa waxay sababaan calool xanuun, laakiin tani waxay ku dhacdaa xaalado naadir ah. Sidaa darteed, haddii aad leedahay taariikh arrin caloosha ama dheef-shiidka, waxaa muhiim ah inaad marka hore la tashato dhakhtarkaaga ka hor intaadan qaadin soosaarida ama dheeri la xiriirta ku dheh khabiirada nafaqada ee GoldBee.
Sidoo kale, qiyaaso badan oo afka laga qaato ayaa ammaan u ah carruurta, halka dalabka la mariyo ay u geysan karaan waxyeelo u eg maqaarka ilmaha. Codsiga jirka la mariyo ayaa waliba sababi kara cuncun maqaarka marka loo sameeyo haweeney uur leh.
Codsiga Soo-Saarista Gargaarka Madoow
1. Hagaajinta dhadhanka cuntada
Sida toonta ceyriinka ah, soosaarka toonta madow waxaa loo isticmaalaa ujeedo cunitaan halka lagu darey suxuunta dhadhanka kala duwan. Waxaa qulqulaa dhadhanka cuntada.
Sababo la xiriira bakteeriyada looga hortago bakteeriyada iyo anti-bararka, soosaarka waxaa loo isticmaalaa qayb muhiim ah oo ka mid ah alaabada kala duwan ee qurxinta. Waxyaabaha la isku qurxiyo ee ay ka kooban tahay waxay waxtar u leedahay ka hortagga finanka ama horumarinta caafimaadka timaha, iyo faa'iidooyinka kale.
3. Kordhinta caafimaadka
Soosaarayaasha toonta madow waxay xoojinayaan nidaamka difaaca jirka. Sidaas oo kale, soosaarka waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo kaabitaanno ka caawiya dadka inay ka fogaadaan cudurrada kala duwan.
Kaabisyo Xaraash ah oo Gargaar ah
Toonta ka soo baxa toonta madow ku yimaadaan qaabab kala duwan oo ay ku jiraan budada laga soosaaray toonta madow, kubadaha toonta madow ee la soo saaray ama casiirka toonta madow. Mid ka mid ah kaabayaasha ayaa ku xusan magaca Black Garlic Extract Tonic Gold, oo ah casiir toon madow ah.
Soosaarida toonta madow waa wax soo saar ah toonta ceeriin khamiir leh. Waxaa lagu heli karaa qaab ah budada laga soosaaray toonta madow, kubadaha toonta madow ee la soo baxo ama casiirka toonta madow. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka soosaarahan ayaa ah hagaajinta nidaamka difaaca jirka, ka hortagga timaha luminta, maqaarka maqaarka iyo hagaajinta codka iyo miisaanka oo yaraada. Soosaarka waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan, oo ay ku jiraan farshaxanka diineed iyo warshadaha qurxinta.
Banerjee S., Mukherjee PK, Maulik S. Garlic as antioxidant: The good, the xun and fool xun. Maskaxda. Res. 2003; 17: 97–106.
Ha AW, Ying T., Kim WK Saamaynta toonta madow (Allium satvium) soosaarida dheef-shiid kiimikaadka saliida ee jiirka ayaa quudin jiray dufan aad u badan. Nutr. Res. Ku dhaqan. 2015; 9: 30- 36
Kang O.-J. Qiimaynta melanoidins laga sameeyay toonta madow kadib tillaabooyin kuleylka kala duwan. Hore Nutr. Cuntada Sci. 2016; 21: 398
Kim DG, Kang MJ, Hong SS, Choi YH, Shin JH Saamaynta antiinflammatory ee xeryahooda firfircoon ee firfircoon ee ka go'ay da'da toon madow. Maskaxda. Res. 2017; 31: 53-61
Milner J. Encyclopedia ee Kaabista Cuntada. Marcel Dekker; New York, NY, USA: 2005. Toonta (Allium sativum) pp 229-240.
1.Waa maxay Soosaarida Toonta Madow?
2.Filiiqa Madoow ee Soosaarida Farsamada
3.Wax soosaarka Garlic Madoow
4.Dhaqanka Madoow ee Gargaarka Caafimaadka
5. Farqiga u dhexeeya Toonta Madoow iyo Toonta Cusub
6. Qiyaasta Soosaarida Garlic Madoow
7.Ma Soosaaray Toonta Madoow Ma Khatarbaa?
8. Codsiga Soosaarida Garlic Madow
9.Kabado Dheeraad ah oo Garlic Extract
L-Ergothioneine (EGT): Cunto ‐ Waxay ka timid Antioxidant leh Awood Daaweyn